ကားတစ်စီး, ဆိုင်ကယ်၏ရှေးခယျြမှု | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးအစား: ကားတစ်စီးကို Select လုပ်ပါ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်
2003g မှအသစ်စီးရီးများမှအသုံးပြုသော Mercedes Vito သို့မဟုတ် Volkswagen Transporter ကို ၀ ယ်ရန်အဘယ်အရာသည်ပိုကောင်းသနည်း။ ဒါမှမဟုတ် Opel Vivaro လား။
2003g မှအသစ်စီးရီးများမှအသုံးပြုသော Mercedes Vito သို့မဟုတ် Volkswagen Transporter ကို ၀ ယ်ရန်အဘယ်အရာသည်ပိုကောင်းသနည်း။ ဒါမှမဟုတ် Opel Vivaro လား။ T4 နှင့် T5 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်များအားလုံးပါရှိသည်။ အကယ်၍ ...
အဆိုပါ Sedan နှင့် Hatchback ကဘာလဲ? ခြားနားချက်ကဘာလဲ
အဆိုပါ Sedan နှင့် Hatchback ကဘာလဲ? ခြားနားချက်ကဘာလဲ ဖြစ်ကောင်းသင်ကမလိုအပ်တဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲကောင်းစွာသင်ထိုကဲ့သို့သောဂန္ sedan ကားပင်စည်ကိုမေးကတည်းက Nedao အဆိုပါ Hatchback စည်နေစဉ်ကားတစ်စီးရှိကိုသိ ...
နှင့်ဝါးတားပိုလို sedan ကားစုဆောင်းထားရာ, ငါ့ကိုပြောပြပါကျေးဇူးပြုပြီး?
နှင့်ဝါးတားပိုလို sedan ကားစုဆောင်းထားရာ, ငါ့ကိုပြောပြပါကျေးဇူးပြုပြီး? သင်ဆဲရုရှားတွင်ကားများ balalaika နှင့်အတူယစ်မူးပြည့်တန်ဆာထက်မနည်း၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ sledgehammers နှင့်အတူဝံယစ်မူးသွားကြောင်းထင်ပါသလား? Kaluga အတွက် ... ။
သင်တိုင်းချုပ်ခြင်း Manado ကြောင့်လား
ဒီကဘာလဲ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်း၌))) ကလမိုင်ဒွန်ဖွဲ့စည်းပုံ: 1 ။ Flagella2။ Vacuoles3 ဆဲလ် wall4 ။ နင်။ Kernel5 Pyrenoid ကိုအဓိကအားဖြင့်အပင်များပြန့်ပွားစေသည်။ လိင်ဖြစ်စဉ် isog - heterogamy သည်အချို့သော oogamy များဖြစ်သည်။
ဘယ်လောက်ကတစ်နှစ်အခွန် 300 မြင်းများကုန်ကျလိမ့်မည်နည်း
ဘယ်လောက်ကတစ်နှစ်အခွန် 300 မြင်းများကုန်ကျလိမ့်မည်နည်း ကောင်းပြီအကြောင်း 30 တထောင် y ကအမည်အား Landik 200 288l ပါပဲ။ 25 Plus အားအခွန်မြက်ပင်, Oats နှင့်ပူဖောင်းအကြောင်းကိုငို ...
လိုအပ်စက်ဘီး Irbis ttr 125 သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လက်ျာ? နေရာတိုင်းတစ်ဦးကအမျိုးအစားများ၏အခွင့်အရေးကိုမလိုအပ်ဖြစ်ကြောင်း, ရေးပါ။ လူအတော်များများလိုအပ်လျက်ရှိသောရေးပါ။ ဘယ်သူ့ကိုယုံကြည်သလော
လိုအပ်စက်ဘီး Irbis ttr 125 သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လက်ျာ? နေရာတိုင်းတစ်ဦးကအမျိုးအစားများ၏အခွင့်အရေးကိုမလိုအပ်ဖြစ်ကြောင်း, ရေးပါ။ လူအတော်များများလိုအပ်လျက်ရှိသောရေးပါ။ ဘယ်သူ့ကိုယုံကြည်သလော မြို့လိုက်ဖမ်း gaytsam န်းကျင် fuck ဆိုတဲ့မနေပါနဲ့😀လျှင်ဂရုမစိုက်ပါဘူး ...
အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရှာတွေ့မှဘယ်လိုနေသလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်ရှာဖွေသူများကြောင့်အခြေခံအမှားကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ကိုရှာဖွေ။ အလုပ်ရှာနေသုံးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်တဲ့အခါမှာအဓိကပြိုင်ဘက်အမှားတွေ: အလုပ်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအတွက် * အမှား ...
အကောင်းဆုံးကို Dodge Challenger, Ford ကား Mustang သို့မဟုတ် Chevrolet ကား Camaro စက္ကန့ကဘာလဲ ???
အကောင်းဆုံးကို Dodge Challenger, Ford ကား Mustang သို့မဟုတ် Chevrolet ကား Camaro စက္ကန့ကဘာလဲ ??? Camaro Mustang စိန်ခေါ်သူတို့ရှိသည်, ပိုပြီးအာဏာကို, အ Camaro Ponikarov သည့်အကြောင်းကိုအဘို့အ Ford Mustang သူဌေး 302 သောင်တူးစက်နဲ့တူးဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သည် ...
Mercedes“ Gelik” jeep ရဲ့နာမည်ကဘယ်လောက်လဲ၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။
Mercedes“ Gelik” jeep ရဲ့နာမည်ကဘယ်လောက်လဲ၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။ Steyr Daimler Puch Gelandewagen နှင့်မာစီဒီးစ်တွင်သူသည်အပေါ်ယံဆက်ဆံရေးရှိသည်၊ ကားသည်သြစတြီးယားလူမျိုးဖြစ်သည်။ လျောက်ပတ်သောစက်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်း ...
တစ်ဦးအသုံး Volkswagen ကဂေါက်သီးဆဌမမျိုးဆက် Buy (လွှတ်ပေးရေး 2009-2013 နှစ်)
အပေါ် Posted 15.05.2018
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအများအပြားအဘို့အ Volkswagen ကဂေါက်သီးကိုပထမဦးဆုံးနိုင်ငံခြားကားတစ်စီးဘဝဖြစ်လာသည်။ က "ဒုတိယ»ဂေါက်သီးစျေးကြီးကုန်ကျစရိတ်၏ 90-s ကိုအပိုင်ရဲ့အဆုံးမှာ။ အချိန် ထိုအချိန်မှစ. အများအပြားလွန်ပေမယ့်ဂေါက်ကွင်း၏မတ်ေတာထားပါတယ် ...
NISSAN QASHQAI သို့မဟုတ်မစ်ဆူဘီရှီ ASX ??? ဘယ်ကျေးဇူးပြုပြီးပိုကောင်းနှင့်တရားမျှတပါ! ? ; ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ..
NISSAN QASHQAI သို့မဟုတ်မစ်ဆူဘီရှီ ASX ??? ဘယ်ကျေးဇူးပြုပြီးပိုကောင်းနှင့်တရားမျှတပါ! ? ; ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကြိုတင်! .. ထိုအစက်တန်းတူလူတန်းစားများမှာ asx-အလားတူအဆိုပါ Lancer Yule နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှ QASHQAI အဆင်ပြေပြေနဲ့မူရင်းစင်ကြယ်သော mo အမြင်,! ...
အော်တိုကဏ္inတွင်“ ဖြတ်” ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
အော်တိုကဏ္inတွင်“ ဖြတ်” ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကားကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ ဒါကတာဝန်ကိုကျော်လွှားခြင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူကားတစ်စီး၏ခန့်မှန်းခြေအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး 600 ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနိယာမမှာဤသို့ဖြစ်သည် - သင်၌ကားဟောင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းအဟောင်းရှိသည်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုရုရှားမှာထုတ်လုပ်နေပြီလား။ Stealth ကိုမော်စကိုရှိစက်ဘီးစက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ Baltmotors သည် Kaliningrad မှတရုတ်လူမျိုးများကိုစုဆောင်းသည်၊ တိုင်းပြည်၏နေရာတိုင်းတွင်အလားတူအခြေအနေမျိုးရှိသည်။ ဘီလာရုစ်တွင် Minsk သည်မော်ဒယ်သစ်များထုတ်လုပ်သည်။
ငါဒီနေရာမှာတစ်ဦးအစွန်အဖျားအိမ်နီးချင်းပိုင်ရှင် Koo-Koo ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကားပိုင်ရှင်များ၏ထင်မြင်ယူဆသောစကားကိုနားထောင်ချင်ပါတယ်။3တထောင်ကီလိုမီတာမှတဆင့်။ သူကတစ်ဦးအာမခံချက်အောက်မှာလုပ်မီးစက်, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုကတန်ဖိုးရှိငွေနှင့်အာရုံကြောတွေအများကြီးနှင့်အတူမိမိကိုမိမိဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အားလုံး ...
Bogdan ပန်းအိုး 2110tehnicheski, အရည်အသွေးအနေဖြင့်မတူပါ
Bogdan သည် 2110 vases များနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်းအရည်အသွေး၊ အရည်အသွေး၏အရည်အသွေးအရ - Lada Priora (struts, springs နှင့်၊ အချို့သောပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအပေါ်ရှေ့ struts ၏ struts) မှ Bogdan ကားများပေါ်တွင်ဆိုင်းငံ့မှု ။- ရှေ့ bumper နှင့် grille ...
အော်တိုဂီယာနှင့်အတူစက်ဘီးရှိပါသလား ထိုကဲ့သို့သောအံ့ဖွယ်ဘယ်လောက်ပါလဲ? ငါကြားသော်လည်းငါ့ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်ဘူး။ ဆိုင်ကယ် Go ကိုလိမ်ကိုမွငျလြှငျ, ဒါပေမယ့် MOTSYK တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမြင်ကြတာပါ။ အွန်လိုင်းတရုတ်ရောင်းချကိုမြင်လျှင် ...
စနစ်တကျစီရင်-သို့မဟုတ် Lamborghini က Lamborghini ကမည်သို့?
lamborghini (သို့) lamborghini ဘယ်လိုအသံထွက်ရမလဲ။ Lamborghini! “ gh” ကိုအီတလီဘာသာစကားဖြင့်ဖတ်ခြင်းသည်“ g” ကဲ့သို့သောအသံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, Lamborghini အဘိဓါန်။ spaghetti - spaghetti နှင့် spaghetti မပါ။ ဘာသာစကားများကိုလေ့လာပါ။ ) Lamborghini !!!! ကုမ္ပဏီ ...
ကြွက်သားကားတစ်စီးဆိုတာဘယ်သူသိလဲ ??? ထိုကဲ့သို့သောအင်အားကြီးမားသောကားများ၊ gt; 200 hp၊ ဥပမာ Shelby, Ford mustang, Chevrolet camaro Muscle Car (အင်္ဂလိပ်ကြွက်သားကား), သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှိခဲ့သောကြွက်သားကားအမျိုးအစား ...
အဆိုပါ Hummer2ပေါ်တွင်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကဘာလဲ?
အဆိုပါ Hummer2ပေါ်တွင်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကဘာလဲ? Tyazhlov ကားတစ်စီးတွင်လွှတ်ဆင်းလမ်း၏နံပါတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘယ်လိုစီးကြလိမ့်မည် ... သို့သော် 20-PFA ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့် ... 30 မှ 25 100 အကြောင်းကိုကီလိုမီတာ liters ... ။
အဆိုပါ Oka ၏အစစ်အမှန်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကဘာလဲ? ရုံရိုးရိုးသားသားဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Oka ၏အစစ်အမှန်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကဘာလဲ? ရုံရိုးရိုးသားသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်ထက်ငါ၏အခန့်မှန်းချက်လီတာ 5-6,7အားဖြင့်မပို။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့် minicar ။ မိမိအနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဆိုအရ: အအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်မြို့ဌ 6,4 / 100 ကီလိုမီတာ ...
17 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,541 စက္ကန့်ကျော် Generate ။